စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: သတ်ပုံမှားတဲ့ နေ့ ..
http://www.myanmarnursesinsingapore.org မှ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများအားလုံးကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေပါတယ်... စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများဘလော့ဂ်သည် သူနာပြုများအချင်းချင်း တွေ့ဆုံခွင့်၊ အသိပညာများနှီးနှောဖလှယ်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက်များဝေငှခွင့်၊ နယ်ခြားမြေခြားတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အခက်အခဲရှိပါက ကူညီခွင့် ရကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ POST များတင်ချင်ပါက myanmarnurses.sg@gmail.com / saikyawthumyo@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပါ၊ လာရောက် လည်ပတ်ကြသော စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများနှင့် တခြားသော ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်နားလည်းပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Home ဟာသ သတ်ပုံမှားတဲ့ နေ့ ..
သတ်ပုံမှားတဲ့ နေ့ ..
Post under ဟာသ at 1/14/2010 02:15:00 PM Posted by nyo
Posted by khinthidakyaw on January 5, 2010 at 11:55pm
Send Message View khinthidakyaw's blog
ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံး အိမ်မက်တစ်ခုက စာရေးဆရာ။ ဖြစ်ချင်တာမှ ဆရာမြသန်းတင့်တို့၊ အမေမာတို့လို့ စာရေးဆရာမျိုး၊ မန္တလေးကိုရောက်ရင် မန်းတောင်ရိပ်ကို မတက်ခင် အမေ့မာအိမ်အပြေးသွားလိုက်ရမှ ကျေနပ်သူ။ သို့သော် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်က ခံစားတတ်သော နှလုံးသားသာရှိသည်။ ဖန်တီးထုဆစ်နိုင်သော သညာကား မရှိ။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်သည် ဟိုနေရာ လက်ဆော့၊ ဒီနေရာ လက်ဆော့ဖြင့် ခပ်ချာချာ စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများက ဝေဖန်သည်။ ကလော်ဆဲသည်။ မေတ္တာပို့သည်။ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် အိပ်မက် မက်ကောင်းဆဲ။
ကိုယ့်ကို စာရေးဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးခဲ့သူက ကိုယ့်ဆရာ စာရေးဆရာဦးရဲနိုင်။ အင်မတန် စိတ်တိုတတ်သူ။ အခန့်မသင့်လျှင် ဆဲတတ်သူ။ ဆရာစာတည်းမှူးချုပ်အဖြစ် မဂ္ဂဇင်းထုတ်ချိန်တွင် ကိုယ်ကစာတည်းအဖွဲ့ဝင် အငယ်ဆုံး။ ဆန်ရင်းနာနာဖွပ် ဆိုသည့်စကားသည် ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စာပေစီစစ်ရေးသို့ စာကြမ်းအစစ်ခံရန်သွားလျှင်လည်း ကိုယ်....။ စာအုပ်အဖုံးရိုက်ဖို့ မင်းသမီးထမိန်ထုပ်ထမ်းပြီးနောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ရလျှင်လည်း .. ကိုယ် ....။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ညီအစ်ကိုတော်များ။ ညီအစ်မတော်များ၏ လက်ရာစုံကို မငြီးမငြူဖတ်ရလျှင်လည်း ကိုယ်...။ လိုအပ်လို့ အငှားခန္ဓာမြှောင်ရလျှင်လည်း ကိုယ်..။ စာအုပ်တကယ်တန်း ထွက်လာချိန်တွင် ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး ဦးဆောင်ဖြန့်ဝေရလျှင်လည်း .... ကိုယ်...။ ဤသို့ အသုပ်စုံကိုယ်သည် စာရေးသူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မလာသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါတကား...။
သည်ကြားထဲ မဂ္ဂဇင်းတွင် အမှားတစ်စုံတစ်ရာပါလာပါက ကွမ်းတမြုံ့မြုံ့ဝါးတတ်သော ဆရာ၏အဆဲကို မျက်နှာတွင် ကွမ်းဖတ်စင်အောင် ခံရပြန်သေးသည်။ သို့သော် ကိုယ်သည် မည်သို့သော အခက်အခဲများရှိရှိ ... အိပ်မက်မက်နေရသည်ကို ကျေနပ်နေသည်သာဖြစ်သည်။
----------------× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × --------------------------
ဒီနှစ်စာအုပ်မှာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အင်တာဗျူးကဏ္ဍလေး ထည့်ချင်တယ်ကွာ။ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ အရမ်းကြီးလည်း မရှည်စေနဲ့။ ဒီဆရာမကြီးက လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကာလကစပြီး တကယ့်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ခဲ့တာကွ။ အသက်အကြီးဆုံးဝန်ထမ်းကောင်းကြီး... ။ သူ့ကို စထည့်မယ်...။ အမျိုးသမီးချင်းဆိုတော့ မင်း သွားဗျူးခဲ့....။
ဆရာက ငပိဆို တပည့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်က ဖုတ်ပီးသားလေ။ ဆရာမကြီးအိမ်ရှိတဲ့ အင်းယားကန်နားက တိုက်ပုလေးဆီကို ချက်ချင်းပဲ အရောက်သွားခဲ့တယ်။ ငွေရောင်ဆံပင်ဖြူလွလွနဲ့ အဖွားအိုတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုံးတွေ့ ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလိုက်တာ။ အရင်တုန်းက တောက်ပခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေဟာ ခုတော့လည်း ဇရာရဲ့အောက်မှာ.... ။
အမေ .. သမီးတို့ မဂ္ဂဇင်းမှာ နိုင်ငံအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဂုဏ်ပြုဖော်ပြချင်လို့ မေးမြန်းခွင့်လေး ပြုပါရှင်...
အော်.. သမီးလေး .. ထိုင် ထိုင် ..... အမေ နားကျပ်ယူလိုက်အုန်းမယ်နော်... ဟိုကုတင်ပေါ် လှဲလိုက်.....
ဟိုလေ .. အမေ .. ဟို .. ဟို. အင်တာဗျူး
အိုအေ.. အမေ သိပါတယ်... ကဲ ကျောကုန်းလှန် အသက်ပြင်းပြင်းရှု........။ အင်း .. အိုကေ .. ငါ့သမီး အဆုတ်တွေ နှလုံးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်....။ ကဲ ဗိုက်ကိုလှန်အုန်း ...........
ဟိုလေ .. အမေ .. ဟို .. .ဟို ..........
မှန်းစမ်း .... ဘာမှ ရှက်စရာမလိုဘူး ..... တကိုယ်လုံးကိုလျှော့ထားလိုက် .... အင်း .. ဟုတ်ပြီ ကဲ .. လှန်အုန်း ...
ရှင် .. အမေ .... တော်ပီလေ .. အမေရဲ့....
အိုအေ ... ရှက်မနေနဲ့ မိန်းကလေး ....... Physical examination ဆိုတာ အကုန်စမ်းရတယ်အေ့ ....။ ကဲ .. လှန်မှာသာလှန်စမ်း ...။
(အင်း ... အကုန်အရှုံးပေးခဲ့ရပြီးပြီ.....။ ဒီတစ်နေရာတော့ အရှုံးမပေးနိုင်...။ ဘယ်ရမလဲ .. ငါကွ ...ထုတ်လိုက်စမ်း ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေ.....)
အား .. အမေ .. ဒူးခေါင်း .... ဒူးခေါင်းက တစ်အားနာနေတာ ကြာပြီ...။
အော် ... ပြဿနာက ဒူးမှာလား ...။ အေး အေး .. အမေ စစ်ဆေးပေးမယ်....။
အဲဒီနေ့က တူသေးသေးလေးနဲ့ ဒူးနှစ်ဖက်ကို အချက်ပေါင်းများစွာ အခေါက်ခံခဲ့ရတယ်.....။ ခြေထောက်တွေ မြှောက်လိုက် ချလိုက် လုပ်ရလွန်းလို့ ဗိုက်ကြောတွေလည်း နာလှပြီ.....။ အင်တာဗျူးလည်း မစရသေး....။ ဆရာ ဆူကာမှသာဆူပေရော့.....။ ပြန်တော့မည်..။
ကြမ်းပြင်ပေါ်က အထမှာ အရင်တုန်းက မနာတဲ့ ဒူးတွေက မျက်ခနဲ နာနေတယ်...။ အဖွားအိုရဲ့ ဆုတောင်းသံအဆုံးမှာ ကွတ ကွတ နဲ့ ထပြန်ခဲ့ရတယ်.....။ အပြန်ခရီးမှာ အဆဲပေါင်းများစွာနဲ့ စောင့်နေမဲ့ ဆရာ့မျက်နှာကြီးကို မြင်ယောင် ကျောချမ်းမိလို့ ကွမ်းကြိုက်တဲ့ဆရာ့ကို ဖားဖို့ ကွမ်း ၂၀၀ ဖိုး ၀င်ဝယ်ခဲ့ရတယ်....။
စာပေခရီးလမ်းက ငါ့အတွက် ကြမ်းလိုက်တာ...။ ကဲ ... သူငယ်ချင်း .... ။ ငါ စာရေးမကောင်းတာ မင်းအပြစ်တင်ချင်သေးလား....
ဒါပေမဲ့ .. ငါ အိပ်မက် မက်နေဆဲပါပဲလေ.........
0 comments: on "သတ်ပုံမှားတဲ့ နေ့ .."
မြန်မာဖောင့် ဒီမှာ ယူပါ
Y.G.H GATHERING 2012 , PART 1
Y.G.H GATHERING 2012 , PART 2
ကဲ.....လာပါပြီ Medical Dictionary for Mobile Phone
ကဲ.....လာပါပြီ Medical Dictionary for Mobile Phone. ဒါကို တင်မယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ထားပေမယ့် အကြောင်းကြောင့် မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး..ကျနော်တို့ သူနာပြုတေ...
သွေးအမျိုးအစား ကပြောသော ဗေဒင်
သွေးအမျိုးအစား ကပြောသော ဗေဒင် " A "သွေးပိုင်ရှင်များ ၏ထူးခြားချက် သွေးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို...
ဒီစာအုပ်ကတော့ RNotes 3rd Edition လေးဖြစ်ပါတယ်..ကျနော်တို့ သူနာပြုများအတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက်နေ...
**လေ့လာကြစို့ အင်္ဂလိပ်စာ** Nursing-1 Nursing-2 english at home ihworld english club English for Success english page free english learn english.uk non stop english rong-chang english roseofyork einlish.uk world english english-myanmar dict:
**နည်းပညာနှင့်အထွေထွေ** စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာ့ပညာရေး Photoshopနည်းပညာ မြန်မာ IT အင်တာနက်ဂျာနယ် ညီနေမင်း သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း မိုးထက်မြင့် နည်းပညာ ဘလော့ဂ်နည်းပညာ ဘလော့ဂါ နှင့် အထွေထွေ ပညာရေးလမ်းစ နည်းပညာများ ဖလှယ်ကြဖို့ ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ ကိုဇော်ရဲနည်းပညာ မြန်မာကျောင်းသားများ ဖိုရမ် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် မြန်မာမိသားစု World Wide Myanmar MZ-Code Mystery Zillion Myanmar Genius mmshare
**စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ** စကားဝါမြေ သံလွင်အိပ်မက် တရားစာအုပ်များ မင်းဒင် မာယာမဂ္ဂဇင်း ရှားပါးစာပေများ ခေတ်လူငယ် မြန်မာကာတွန်းများ မြန်မာဝတ္ထုစာအုပ်များ ၀ိညာဉ်သစ်
**အားကစားသတင်းများ** Eleven ဂျာနယ်များ အားကစားသတင်း အားကစားချစ်သူဆုံဆည်းရာ အားကစားဂျာနယ်များ ပရီးမီးယား
*အိမ်ခန်းရှာ/ဌားရန်အတွက်* room rental myanmarroom shweroom
***အနုပညာ ဆုံဆည်းရာ*** မြန်မာပုံရိပ် ရွှေအိုးဗှီဒီယို နေ့သစ် အလိုရှိရာ နားဆင်ပါ ထာဝရ သူငယ်ချင်းများ......... Myanmar Celebrity မင်းသီလ အရိုင်းပန်း Myanmar Songs.net မဉ္ဇူရီ Zaideih Shwe Dream Pansagar Myanmar Music.net Myanmar MP3.net Free Myanmar VCD Burmese Classic All Channel
[===== အိမ် == ရည်ရွယ်ချက် == ကျန်းမာရေ: == သုတပဒေသာ == ကဗျာ == ဟာသ == ဆောင်းပါးများ == ၀တ္ထုများ == ဗေဒင် == အတွေးအမြင် == MUSIC == PHOTOS == EBOOK == ROOM RENTAL =====] Designed by မောင်မောင်မျိုးမင်း